Thwebula YouWave 3.31 – Vessoft
WindowsUkuthuthukiswaEmulators nemishini eyi-VirtualYouWave
Ikhasi elisemthethweni: YouWave
YouWave – isofthiwe thwebula futhi ukugijima izicelo yakhelwe uhlelo Android. YouWave iqukethe umshini Android virtual okuyinto efakwe kusukela ukusatshalaliswa. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukugijima izicelo ahlukahlukene kanye imidlalo a disk wendawo noma uyazilanda kusukela internet. YouWave eveza le esibonakalayo indinganiso Amadivayisi Android kwenza ukuba ulungise usayizi wesibuko. Isofthiwe futhi likuvumela ukulanda okuqukethwe kusuka Google Play kanye nezinye izinsizakalo. YouWave iqukethe umsebenzi SD-ikhadi, eyenza ukwabelana amafayela namafolda.
Download and run izicelo Android
Machine virtual Android
Ukuxhumana ne-service Google Play
Amazwana ku YouWave
YouWave software ehlobene
Isofthiwe yakhelwe ukufaka futhi ugijime wokusebenza ezahlukene imvelo virtual ne nemingcele kwanoma iyiphi ikhompyutha.
Kuyithuluzi elihle ukuhlonza kufihlwe amafayela ezisolisayo yezinkampani ehlukahlukene yokwaziswa. Isofthiwe ubonisa umbiko inqubekelaphambili kanye amafayela bathola.